IINGCACISO EZICWANGCISIWEYO ZENSIMBI KUNYE NECONS - IZITIYA KUNYE NOKUHLALWA KOMHLABA
Eyona izitiya Kunye Nokuhlalwa Komhlaba IiNgcaciso eziCwangcisiweyo zeNsimbi kunye neCons
IiNgcaciso eziCwangcisiweyo zeNsimbi kunye neCons
Nasi isikhokelo sethu kubuchule bokubiyela ngetsimbi kunye neengozi kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo, iindleko kunye nemibono yoyilo lwe-DIY. Ucingo olucekeceke ngamazinki lunokuba yindawo ebukekayo nokhangelekayo yanamhlanje ephethe izinto ezenza ukuba ibe lukhetho olunokubakho kubanini bepropathi.
Umsebenzi omninzi uye wenziwa kwinkqubela phambili yenkqubo yokuvelisa yentsimbi. Ukukwazi ukufikelela kumaqondo obushushu aphezulu ngexesha lenkqubo yokucoca kusivumela ukuba sixube intsimbi ephezulu kunye neepropathi ezimangalisayo.
Namhlanje, uza kubona iingcingo ezintle zentsimbi ezinezakhelo ezinomtsalane kunye nemibala eqaqambileyo enokudityaniswa idityaniswe ukulungelelanisa umxholo wekhaya lakho kunye neyadi yakho yangasemva, igadi okanye ipatio. Bona enye iintlobo zocingo Apha.
Yintoni ucingo olubiyele?
Yenyuka Metal Kucingo olubiyele eziluncedo
Yenyuka Metal Kucingo olubiyele Cons
Yenyuka Metal Kucingo olubiyele
Iingcamango zeNgcaciso zeNtsimbi
Incence yabucala yentsimbi eyenziweyo
Ucingo lweCarrugated Metal Fence
Yenyuka Metal Kucingo olubiyele Thatha
Ucingo olubiyele ngamazinki lwenziwe ngetsimbi enamazembe kunye neentlambo, ngokusisiseko lishiti lesinyithi eligotyiweyo nelolulwayo ukwenza iirobhothi ezenza iprofayile echaziweyo. Iprofayile yesiko xa ujonga umbono wecandelo layo inoluhlu lwamaza anobude obulinganayo,
Namhlanje, kukho iiprofayili ezahlukeneyo zesinyithi. Iincopho kunye neentlambo ngaphesheya komphezulu wetshati edityanisiweyo yeyokomeleza amandla.
Iintlambo zisebenza njengemijelo yamanzi nayo, yiyo loo nto ezi sheet zifumaneka eluphahleni. Amanzi esihla ngemijelo aye kumjelo wamanzi.
Ngolu hlobo loqwalaselo kunye ne-engile yophahla, umakhi wezakhiwo unokufumana indibaniselwano efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba inkunkuma kunye namanzi aziyi kuqokelela eluphahleni.
Ngokubhekisele kwimichiza yesinyithi, ukombathiswa kwesinyithi okwahlukileyo kuyongezwa ukumelana nokubola; izinyithi ezinjenge-zinc kunye nobhedu zingafunyanwa njengonyango oluqhelekileyo.
Iimakhishithi zentsimbi zikwalungele nokusingqongileyo. Amashiti amadala kwaye ahlaselweyo akufuneki alahlwe kude. Ezi zinto ziphinda zisetyenziselwe ezinye iinjongo, njengokwakha inkukhu okanye ukuyisebenzisa njengophahla lwezindlu zezinja okanye ezinye iintlobo zamakhaya angadingi sigqubuthelo sisebenza ngokupheleleyo.
Amashiti ezinyithi angenakusetyenziswa athunyelwa kumzi mveliso wokurisayikilisha ukuba unyibilike kwaye wenziwe iphepha lophawu kwakhona.
Ngoku siza kuqhekeza i-corrugated metal pros and cons ukuze ubone ukuba olu hlobo locingo lulungele iimfuno zakho.
Ixesha elide . Into emnandi ngothango lwentsimbi oluthambileyo kukuba iikiti zepaneli ziyafumaneka ukusuka kwi-6 yeenyawo ukuya kwi-12 yeenyawo kunye nee-intshi ezingama-24 (2.1 iinyawo) ububanzi zenza ukuba kube nakho ukubiya ngokuqinileyo kwiipropathi ezinkulu.
Ubukhulu bokubiyelwa kwamazinki rhoqo kuqhelekile ngama-24, 26 okanye ama-36 intshi ububanzi nee-intshi ezingama-48, ii-intshi ezingama-72 okanye i-intshi ezingama-96 ukuphakama. Unokufumana abanye abavelisi abanikezela ngobude obumiselweyo ngokunjalo kodwa banokuxabisa ngaphezulu kobude obuqhelekileyo.
Ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyifaka. Ngenxa yokuba yinto elula, ungalusebenzisa ngokulula iphepha lesinyithi nakweyiphi na indawo okanye iimeko onazo kwipropathi yakho. Ukufakwa kwayo ngokuthe ngqo kuvumela abaninimzi ukuba benze ukufakelwa kocingo lwentsimbi njengeprojekthi ye-DIY.
Kuhlala ixesha elide. Ngomyinge weminyaka engama-25 ukuya kwengama-30 yobomi benkonzo, kutyalo mali olusebenzayo. Kukwakho nocingo lwentsimbi olumbindi oluphakathi olungahlala ukusuka kwi-30 ukuya kwi-40 iminyaka. Kwiiphaneli ezishinyeneyo unokulindela ukuba ucingo luhlale ukusuka kwiminyaka engama-50 ukuya kwengama-75 ngolona hlobo lubalaseleyo nolunonophelo.
Eziguquguqukayo. Unokusika ngokulula ucingo oluthanjisiweyo nge-tin snips okanye isetyhula yesarha yebakala elingqingqwa kunye namashiti amade kulo naliphi na icala olifunayo.
Ukuphathwa ngokulula kunye nokwenza ngokwezifiso izinto zentsimbi kwenza kube lula ukuyidibanisa nezinye izinto ezinje ngomthi okanye ivinyl. Kwakhona kulula ukuyifaka kwiitreyini ezisikiweyo kuba akukho mhlaba unzima ofunekayo ukufaka iipaneli zentsimbi.
Iyafumaneka. Iipaneli zetsimbi ezifuthisiweyo ziyafumaneka kwiivenkile zokwakha kunye nezehardware, kwaye kuhlala kukho ikontraka lasekhaya elinokuthi lenze ufakelo. Iiphaneli zentsimbi ziza kuluhlu olubanzi lwezinto ezikhethiweyo ezikumgangatho, ke uya kufumana ngokulula iprofayili efanelekileyo, umbala, kunye negeji kwiimfuno zakho.
Akunakulindeleka ukuba uhlangane neengcingo zesinyithi esele ziza nezinto eziyimfuneko zokwakha. Amashiti, izakhelo, iibholiti, iinzipho, isamente, njl., Kufuneka zithengwe ngokwahlukeneyo. Iimfuno zeprojekthi ziya kumisela ukuba zeziphi izinto kunye nobungakanani obuya kufuneka.
Iimakhishithi zetsimbi ezipeyintiweyo zipeyintwa kwicala elinye kuphela ngaphandle kokuba ngumyalelo omkhulu.
Inkangeleko emangazayo. Ngelixa iinkuni kunye ne-UPVC ngokungathandabuzekiyo zizixhobo ezibi kakhulu zokubiyela, ucingo lwamazinki oluthimbayo lubangisana nolu biyano lwesiqhelo ngenkangeleko yalo yanamhlanje kunye nokungafani.
Kuxhomekeke kuyilo lwakho lokubiyela, ungafezekisa ukubonakala okuncinci kunye neprofayili elula kwaye elula okanye ufumane ukubukeka kwe-rustic okanye kwishishini lokungapeyintwa okanye kwiiphaneli zetsimbi ezimnyama.
Ukufikeleleka. Ucingo oluyinkcenkce lukhetho olufikelelekayo kubanini bamakhaya, kwaye ekubeni kulula ukuyifaka, yiprojekthi enkulu ye-DIY. Ukuhamba ngokulula, ukufakwa kwe-DIY, kunye nokufumaneka kwayo kuyenza ibe yeyona ndlela inexabiso eliphantsi kunezinto eziqhelekileyo zokubiya.
I-Flimsy. Ucingo oluyimfihlo lwentsimbi olucocekileyo luhlala luhlala luqinile kwaye luyakwazi ukumelana neemeko zemozulu ezibi, kodwa ukuba ifakelwe uyilo olubi lwendalo, lunokutsalwa yimimoya enamandla.
Iinyawo ezintandathu ukuya kwezisibhozo sisithuba esiqhelekileyo phakathi kwezithuba zakho. Enye indlela yokunciphisa obu bumdaka kukumisa isithuba ngokusisigxina.,
Imiphetho ebukhali. Imiphetho ebukhali yentsimbi ebhityileyo, ingakumbi xa ifakwe kubude obusezantsi iyingozi. Imiphetho yeepaneli kufuneka yenziwe ukuze kuthintelwe abantwana okanye izilwanyana zasekhaya ekubeni zifikelele ekuzisikeni kule miphetho.
Ubungakanani bokuRusa . Njengazo naziphi na izinto zesinyithi, iityhubhu zetsimbi ezinamazinki zinokugqwala kwaye zonakalise ixesha ngokungajongwanga ngoko ke kuya kufuneka uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uhlawule.
Sebenzisa into efanayo kwalenza kwizikrufu zakho, iibholiti kunye nezinye izinto zokubopha ezisetyenziselwa ukubiyela ngocingo lwakho ukuthintela ukurusa. Nangona kunjalo, ukuba uyayithanda imbonakalo ye-rustic yocingo lwesinyithi ungaya kwiimakhishithi zentsimbi ezingezizo i-galvanized.
Ucingo olubiyele ngentsimbi luyinto efikelelekayo ngenxa yezinto eziphantsi, umsebenzi kunye neendleko zokugcina. Njengoko iindleko zinxulumene nomgangatho wayo apho ukujija kwakho isilinganisi sentsimbi kuye kwamnceda ukuba afumane umvuzo kodwa kodwa ngokubanzi kunjalo nangamanani ajiyileyo anje nge-26 okanye i-29.
Kwi-avareji yentsimbi ebunjiweyo, ucingo lubiza i-10- $ 12 ngeenyawo nganye yomgama xa kuthelekiswa ne-vinyl enokubiza malunga ne-20- $ 35 ngeenyawo zomgama kunye neenkuni zimalunga ne- $ 10- $ 18 ngeenyawo nganye.
ukutshintsha igama lakho kwi-utah
Ngale nto ithethwayo, kungcono uhlahlo-lwabiwo mali oluyi- $ 4 ukuya kwi-8 yeedola + ngeenyawo ngelixa ugcina iindleko zabasebenzi.
Nazi ezinye zeengcinga ezintle zothango lwasekhaya.
Yiya ngokuthe tye
Xa ufuna ukugubungela umjikelezo omde, ipaneli ethe tyaba inokuba nefuthe ngokubonakalayo endaweni yofakelo oluqhelekileyo olumi nkqo.
Ungayishiya ngaphandle kokuyila okanye ufake ifreyimu yomthi ngozinzo kwaye wenze ukujonga ngolwimi lwasekhaya kwiyadi yakho yangasemva.
Sebenzisa iipali ezakhiwe ngezitena okanye ezixulutywe ngamatyeli alinganayo ngokusebenzisa ucingo olubiyele ngentsimbi ukudala inkangeleko yomhlaba. Umbala werusi wendalo odityaniswe nelitye lendalo yindawo entle yangasemva kuyo nayiphi na igadi.
Uhlobo lweplanga yePlanga olwenziweyo olubiyele
Isitayile somthi weplanga ucingo oluthambileyo lunokubonelela ngenkangeleko yemithi yendalo. Olu hlobo locingo lukhangeleka luyindalo ngakumbi kunocingo lwesinyithi ekrwada kwaye lubonelele ngokuhambelana ngakumbi kwiyadi yakho yangasemva.
Inkcenkce eyenziwe ngokhuni kunye nocingo lomthi yinto ethandwayo ngenxa yokuba ezi zinto zimbini zibukeka zilungile xa zidibene neempawu zazo. Umthi kunye nesinyithi ziyancedisana kakuhle. Isinyithi sinokubonakala sibanda kwaye siqhelekile ngelixa iinkuni zikhangeleka zendalo, ke ngoko ukuba zinike ukubukeka kwendalo.
Yenziwe ngentsimbi ebiyelweyo kuMhlaba oMathambeka
Iipaneli ezinamazantsi zithengiswa ngephepha, ziyafumaneka ngokulula, zilula, kwaye kulula ukusebenza nazo, ezenza ukuba zilungele ukubiya kumhlaba othambekileyo. Ucingo kulula ukulifaka ukuba kunokwenzeka ukuba kwenzeke iimpazamo, uhlengahlengiso lulula.
Kucingo olubiyele ngokwezifiso
Ungalujika ucingo lwakho lwesinki lube ngumsebenzi wobugcisa wokutsala amehlo ngezinto ezahlukeneyo zentsimbi, umthi kunye nelitye elilungelelaniswe ngokufana nesiqwenga sebhodi. Isiphumo ngumxube onomdla wezixhobo.
Iimarike zokuhlala kunye nezorhwebo zifumene ukusetyenziswa ekusetyenzisweni kocingo lwabucala ngamashiti adibeneyo. Iingcali ezinje ngabakhi bezakhiwo, abakhi, kunye nabanini bezindlu, bakhetha le nto kunezinye izinto ezinje ngomthi okanye ivinyl.
Isinyithi sokubiyela isinyithi somelele ngokwaneleyo ukumelana nobume obungqongqo. Ubomi obude buphuculwe ngokubapeyinta ngento eyongezelelekileyo yokukhusela, kwaye baya kuhlala ixesha elide.
Ucingo lwentsimbi lulondolozo olusezantsi, kwaye kwimeko leyo, ifuna ukutshintshwa, iphepha elitsha linokufakwa ngokulula. Bona Okuninzi izimvo zocingo lwabucala Apha.
Isinyithi esenziwe ngenkcenkceshela sisondlo esisezantsi, kwaye akufuneki ukuba sonakaliswe okanye sinyangwe (ukupeyinta akunakukhethwa). Ucingo lolu hlobo lukhululekile kakhulu kulondolozo lonyaka kangangoko kuthengwa umgangatho olungileyo, amashiti angqindilili.
Ngoku, ngaphambi kokuthatha isigqibo sokufaka ucingo lwakho, qiniseka ukuba ujonga kwimithetho yasekuhlaleni ngokubhekisele kufakelo lokubiya. Qinisekisa ukukhusela iimvume ezifanelekileyo (ukuba ziyafuneka). Nje ukuba kuvunywe, ubumnandi buqala.
Landela iinkqubo ezifanelekileyo njengokuqinisekisa ukuba iiposti zakho zi-intshi ezi-18 ubunzulu. Ewe kunjalo, oku kuxhomekeke kubude becingo kunye nezinye iimeko. Ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqhubeka njani, qesha ingcali ukuze ikuncede kwinkqubo yokwakha.
Ukunceda ekwenzeni ucingo lwakho kukho iindlela ezahlukeneyo isoftware yoyilo locingo iinkqubo. Uninzi lwezi nkqubo lunokukunceda ubeko locingo lwakho, umisele inani lezixhobo ozifunayo kunye noqikelelo lweendleko zizonke.
Ukubiyelwa kwepropathi yakho ayisiyiyo kuphela into ebiyelweyo yentsimbi. Isetyenziswa njengesithintelo somoya kwizicelo zezolimo. Ingasebenza njengesithintelo kwimimoya enamandla nakwikhephu ukukhusela imfuyo kwiindawo ezifumana ubusika.
Ukuba ufuna ucingo olubiza ixabiso eliphantsi, kwaye lufakelwe ngokulula, nokuba kungenxa yocingo olusisigxina okanye lolwexeshana, ungabheja imali yakho ukuba le yeyona ndlela ihamba phambili.
Kukho iinkampani ezinikezela ngeenkonzo zazo kubantu abafuna uncedo lobuchwephesha ngezigqibo ezinje ngokujonga ubungakanani, ubukhulu, okanye umbala wocingo lwakho.
Ucinga ntoni malunga noluhlu lwethu lwezinto ezinobungozi kunye neengcango zetsimbi? Sazise ukuba ucinga ntoni ngezantsi.
iingoma zokuya kulwamkelo
amakhonkco akhe omtshato nawakhe
Ukukrazula isimemo somtshato rsvp